#Hogaamiyaha Dalka Farmaajo oo ka hadlay sababaha weerarada uga dhacaan Muqdisho - Get Latest News From Horn of Africa
#Hogaamiyaha Dalka Farmaajo oo ka hadlay sababaha weerarada uga dhacaan Muqdisho
“Hadii aan fursad siino haatan sidaan ayay ula dagaalayaan dowladaha dambe … marka shacab iyo siyaasiyiin waa in aan u midowno, oo aan ciidanka ku caawino xogta cadowga,” ayuu raaciyay.
Mar uu soo hadal-qaaday howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidanka dowlada ay ka sameeyeen qaar kamid ah gobolada dalka ayuu tibaaxay in ay ciidanka kasoo hooyeen guulo.
“Meelihii ay qaraxyada kasoo gelin jireen [Muqdisho] ayaan ka qabsanay,” ayuu xusay, isaga oo ku daray “Ciidankeenu waa in aan ku taageeraan caano iyo biyo.
Xoogaga dowlada ayaa illaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyay in ay Al-Shabaab ka qabsadeen todobaadkaan tuulooyin ay ugu muhiimsan tahay Sabiid.
“Waxay Muqdisho qaraxyada uga fulinayaan waa in la yiraahdo meeshaasi dowlad kama jirto,” ayuu hadalkiisa kusii daray madaxwaynuhu.
Madaxwayne Farmaajo oo ku nuux-nuux saday in dowladiisu ka go’an tahay in ay xididaha u siibto Al-Shabaab ayaa cod dheer ku qiray in ay jiraan dad Soomaaliyed gudaha iyo dibada ku nool oo lacago ku taageera argagxisada.